Baraha bulshadu ku kulmaan maxaad kala socotaa dhibaatadooda iyo faa’iidadooda? | Awdalpress.com
Baraha bulshadu ku kulmaan maxaad kala socotaa dhibaatadooda iyo faa’iidadooda?
Waxa Daabacay staff-reporter on Apr 3rd, 2017 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Dadka xiiseeya xidhiidhka bulshada ama wararka siyaasadda iyo kuwa bulshada raadiyaa waxa ay marba marka ka danbaysa aad ugu soo badanayaan baraha bulshadu ay ku leeyihiin InterNetka. Farriimaha, wararka iyo sheekooyinka oo la isugu gudbiyo maqal, muuqaal iyo qoraal. ayaa qof walbaa shitaa ka uu doonayo.
Barahaa bulshadu ku kulmaan waxa ay u dhisan yihiin qaabab badan, oo kooxaysan. Wakhtiyadii ay bilawdeen, waxa u badnaa dadka aqoonta u leh InterNetka, waxana ay isu kooxaysan jireen sida ay isugu xirfadda yihiin amma ay iskugu mabda’a yihiin. Laakiin waxa ay immiga u gudubtay wajiyo badan.
Haddaba haddii aan si gaar uga hadallo qaababka ay Somalidu guud ahaan u isticmaalaan baraha bulshada, ayaa immiga isugu soo biyo shubtay hayb QABIIL amma inta isku xaafad amma tuulo ka wada timid. Baraha aadka loogu badan yahayna waxa ugu badan FACEBOOK iyo WhatsApp.
Inkasta oo FACEBOOK gu uu ka geddisan yahay barta WhatsApp ka ayaa haddana midba midka kale dhinacyo kaga fiican yahay. WhatsApp ka oo loo arko ka ugu asturan ee kooxi ku kulanto, ayaa is kooxaysigu aad ugu badan yahay. Is kooxaysigaasi marka uu qabiil isugu biyo shubto, waxa fara bata kala fikir duwanaanshaha iyo kala wacyi duwanaanshaha aqooneed iyo ilbaxnimo. Amma aan idhaahdee kala duwanaanta mujtamac ee ragga iyo dumarka. Dhallin yarta iyo dadka da’da ah. Had iyo jeerna waxa bartaa WhatsApp ka dhex muuqda is maan dhaaf iyo xanaaq badan amma isku dhac aan caadi ahayn.
Inta badan khilaafyada ka dhasha is kooxaysigan ayaa ku salaysan is faham-waa iyo qoraal uu qof soo dhigay oo qof kale u arko in isaga loo jeedo. Hase yeeshee waxa dhibta ugu weyni dhacdaa, marka si ka fiirsi la’aan ah uu qof u qoonsado qof kale, ee labadii qof isku dhex aflagaadeeyaan golahaa dadka badani ku kulansan yihiin. Habeenka amma maalinta golaha khilaafku ku batana waxa cirka isku shareera xiisaha golaha iyo xanta amma comment ka ay dadku ka bixinayaan khilaafkaasi, ee sida gaar looga wada sheekaysanayo.
Khilaafyada uu social media hu, amma baraha bulshadu ku kulmaan ay keenaan, ayaa waxa ay sababaan in xidhiidhka dad badan oo asxaab ahaa uu aad u xumaado, oo weliba dariiqyada la isaga baydho. Xataa dad badan oo ixtiraam iyo saaxiibtinnimo qaali ahi ka dhaxaysay ayaa isku waaya. Arrintani oo bulshada Somalida ku cusub ayaa u eg mid aanay bulshadu weli dareemin xanuunkeeda. Dhinaca keliya ee ay arkayaana ay tahay uun xiisaha soo jiidashada leh ee barahaasi leeyihiin.
Dhinaca kale baraha bulshadu waxa ay leeyihiin qaybo aad u fiican, oo iska war hayneed, is caawin ama is wacyi gelin. Mararka qaarna waxaba ku badan ducada, wacyiga diinta iyo farriimaha kale ee kooxahaasi isku soo jiidanayaan. Tartanka siyaasadda ayaa isna qayb weyn ka ah ujeeddeeyinka loogu soo ururo barahaasi.
Si kastaba ha ahaatee, waxa aan shaki ku jirin in baraha bulshadu ay faaa’iido iyo khasaaraba leeyihiin. Waxase loo baahan yahay in dadka isugu imanaya barahaasi bulshadu ay ka taxaddiraan farriimaha ay isku gudbinayaan iyo maxsuulka ay rabaan in ay dadka ay u gudbinayaan ay helaan. Ta kale ee loo baahan yahayna waxa weeyi, in qofku ku xisaabtamo wakhtigiisa, oo aanu si macno la’aana uun u daayicin, ee bal ugu yaraan qorshaha ku darsado in uu wax faa’iida ah uu ka helo. Inkasta oo uu qofku mararka qaar u baahan yahay in uu la qoslo saaxiibbadii, la kaftamo, oo uu farxad ka helo.